Ihe ngwọta dị elu nke ngwanrọ Microsoft Exchange Server 2013 na-agụnye icheta mkpa ọ dị ịnweta ikike & ozi iji mee atụmatụ & dezie ọnọdụ ọnọdụ maka Microsoft Exchange Server 2013. Na ohere na ị nyochaala nyocha nke Core Solutions nke Microsoft Exchange Server 2013, ị nwere ike iwepụta usoro a iji melite nzukọ nke Exchange Server gị.
Ihe ngwọta dị elu nke nchịkwa Microsoft 2013 Microsoft Exchange nwere ike ị nweta site na nrụsi ike na-agwa ndị nchịkwa, ndị ọkachamara IT, na nyere aka na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-achọ ịmụ ihe na ExchangeNet 2013 Exchange Server. Omume ahụ na-egosi gị ịhazi Exchange Server 2013 & enye nduzi, usoro kacha mma, & ntụgharị uche iji nyere gị aka izipu Exchange Server. Kedu ihe ọzọ, a na-enye usoro a maka ịkwadebe ihe maka ndị ọkachamara IT na-egosi maka nyocha Advanced Solutions Microsoft Exchange Server 2013 nyocha, ma ọ bụ dị ka ihe dị mkpa maka nkwenye Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE). Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịbanye maka usoro ahụ, ị ​​ga-enweghi afọ 3 nke na-arụ ọrụ na ngalaba IT - karịsịa na ngalaba nke nzukọ usoro, usoro ntụle ma ọ bụ ọrụ enyemaka. Dị ka ihe na-adịghị mma, a na-atụ anya ka ị rụọ ọrụ na Exchange Server 2013 ma ọ bụ ihe ọzọ na-aga n'ihu Exchange Server.
-> Kedu ihe ị na-eburu na ntinye ihe a?
Mgbe ị gwụchara, ị ga-enwe ike:
Hazie ma mezuo Exchange Server 2013 Izi ozi.
Mee ka njirimara na-akwado maka ọrụ Exchange Server 2013.
Nhazi & megharia ihe site na ntanye mgbasa ozi na-abụghị Exchange ka Exchange Server, na nkwalite si na-aga n'ihu ụdị dị iche iche nke Exchange Server.
Hazie & gbanwee mgbanwe maka saịtị Exchange Server 2013.
Hazie ma mezuo ozi na-enye nchekwa.
Hazie ma mezuo ozi nzi na Exchange Server 2013.
Hazie ma mebie nchedo njikwa na ọnọdụ Exchange Server 2013.
Hazie ma mezuo nkwenye.
Wụnye Windows PowerShell® 3.0 interface na onyeisi oche Exchange Server 2013.
Hazie ma mezuo nkwenye nke ịmara.
Hazie & mechie ijikọta na Exchange Online.
-> Gini bu isi ihe omumu nke choro ka o ruru eru maka akwukwo a?
Ndị ọzọ karịa ahụmahụ ọkachamara, ịkwesịrị ịnweta ohere pụrụ iche na-esote na ohere ị ga-aga n'usoro ihe omume a:
Ngwọta Ngwọta nke Microsoft Exchange Server 2013 nkwenye, ma ọ bụ usoro mmemme
Ọ dịkarịa ala afọ abụọ nke ọrụ ọrụ na Exchange Server
Ọ dịkarịa ala afọ abụọ nke itinye aka na nlekọta Windows Server, yana ọzọ Windows Server 2012 ma ọ bụ Windows Server 2008 R2
Ọ dịghị ihe na-erughị ọnwa isii nke ọrụ ọrụ na Exchange Server 2013 ma ọ bụ Exchange Server 2010
Ọ dịkarịa ala afọ abụọ nke ọrụ ọrụ na mkpebi aha, nọmba DNS
Ọ dịghị ihe na-erughị afọ abụọ nke ọrụ ọrụ Active Directory
Ịme ihe ọmụma na Windows PowerShell
Na-arụ ọrụ na akwụkwọ akụkọ, dịka ọmụmaatụ, PKI (Public Key Infrastructure)
Ọ bụrụ na ị ga-aga usoro mmemme a, i nwere ike imeju ihe ndị ahụ site na ịga na Core Solutions nke usoro Microsoft Exchange Server 2013 ma ọ bụ site n'ịmụmụ ihe na aptitudes metụtara ya. A na-atụ aro na ị ga-akpọtụrụ ndị na-edozi ihe ndị a kwadoro iji mezuo nkwenye ndị a.